FLASH SONG: ပုလင်းတစ်လုံးရဲ့.ခပ်နက်နက်ရာဇ၀င်
အကျိုးပေးကောင်းတာက အဲဒီရွာမှာတွင်းကြီးတတွင်းရှိတယ် တော်တော်နက်နက်ပေါ့ အဲဒီတွင်းထဲကဘာတွေရလဲဆိုတော့... ရတယ်... ရေတော့မဟုတ်ဘူး အရက်တွေလေ အရက်တွေ ဟုတ်တယ်အရက်တွေရတယ် ..။
လူတွေကအရက်တွေကိုလိုချင်ရင်ဟိုးတွင်းကြီးအောက်ခြေထိဆင်းခပ်ရတယ်..။သောက်တဲ့သူတွေဘယ်လောက်များလဲမသိဘူးတွင်းကြီးကနက်သထက်နက်လာတယ်..။ တခါဆင်းပြီးရင်တနေ့လောက်ပြန်တက်ဖို့ကြာရော ဒါပေမယ့်အရက်တွေကမကုန်ဆုံးသေးဘူးဒီတော့ဆင်းသွားခပ်မယ့်သူတွေကဘာလုပ်ကြလဲ...။
သူတို့ကလဲအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားကြတယ်ဗျ...ဘာအတွက်ဘယ်လိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်လဲတော့မသိဘူး..တွင်းကြီးရဲ့ဘေးနားမှာပဲ တဲလေးတွေထိုးပြီးနေကြတယ်.။ ဆင်းရလွယ်အောင်လေ..။ ဒီလိုနဲ့တက်လိုက်ဆင်းလိုက် .....။သူတို့ရဲ့တနေ့တာအချိန်တွေကိုအရက်တွင်းကြီးထဲတက်လိုက်ဆင်းလိုက် အရက်ခပ်လိုက်သောက်လိုက်နဲ့အချိန်တွေကုန်နေကြတယ်..။
ပုလင်းတူဗူးဆို့ဆိုတဲ့စကားပုံကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား ဒီရွာရောက်ရင်တော့ပုလင်းတူမော့စို့ပဲ... ဟုတ်တယ်လေ...
ပုလင်းတူရင်ဟိုလူပုလင်းဒီလူယူမော့ ဒီလူပုလင်းဟိုလူယူမော့နဲ့ ပက်ပက်စက်စက်ကိုမော့သောက်ကြတာ
မျက်နှာတွေကလဲ အရောင်တွေစုံလို့ လူတိုင်းမှာလဲပုလင်းတွေကိုယ်စီရှိကြတယ်ဗျာ ဒီတော့သူတို့ရွာကို ပုလင်းရွာလို့ခေါ်တာမှားမယ်မထင်ပါဘူး ...
ကျနော်ရောက်တော့မိုးတွေရွာမနေပါဘူး ပုလင်းတွေဝေနေသံတော့စီနေတာပဲ နဲနဲလေးဆက်လျှောက်မိတယ်ကြံသေး..
ဟေ့လူ ဘယ်သွားမလို့လဲ ရော့ ဒီမှာ ပုလင်းယူသွား
ဘာလဲဟ ဆီပုလင်းလား ဘာလားညာလား ဒီလိုပေါ့ ခဏကြာတော့အဲဒီလူကိုယ်တိုင်ပုလင်းလာပေးတယ်
အလဲ့ သူကိုယ်တိုင်ကလဲ လည်ပင်းမှာပုလင်းတွေဆွဲလို့သူကြည့်ရတာအင်္ဂုလိမာလနဲ့တူလိုက်တာ.
ဒီလိုနဲ့ပုလင်းဆွဲပြီးလျှောက်သွားတော့ ဘယ်နေရာလဲမသိဘူးရောက်သွားတယ် တွင်းတတွင်းကိုပတ်ချာလည်ပြီးဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေနေရာ
ဟေ့လူ ကျနော်ကိုဆွဲတင်ပါအုံးဟ ....
တွင်းစပ်မှာဖားလိုကုပ်ကပ်တွယ်နေသူတဦး... ကုပ်ကပ်တက်လာတာဆိုရင်ပိုမှန်မယ်ထင်တယ် သူကြည့်လိုက်တော့လည်း လည်ပင်းမှာပုလင်းတွေပုလုံစီချိတ်လို့... လူရောပုလင်းအလေးချိန်ပါတော်တော်လေးလေးကြီးကိုချွေးဒီးဒီးကျအောင်ဆွဲတင်လိုက်ရတယ်။သူကတော့တွင်းနှုတ်ခမ်းပေါ်ရောက်တော့ကျကျနနတောင်မထိုင်ဘူးနှုတ်ခမ်းနားတေ့ပြီးပုလင်းတလုံးကိုပလုံကနဲနေအောင်မော့သောက်လိုက်ပြီးမှ
ဘာလဲဟ ဒီလူတွေ အလကားနေ ပုလင်းပေးလိုက်ပုလင်းမေးလိုက်နဲ့
ပလုံဆိုတာကသူဆီကအသံ ဂွီဆိုတာက ကျနော်ဆီကအသံ
ဗိုက်ဆာလိုက်တာဗျာ စားစရာမရှိဘူးလား ....
ဟင့်အင်း ကျနော်အရက်မသောက်ချင်ဘူး စားစရာပဲပေး
ဒီရွာမှာစားစရာမရှိဘူးဗျ တရွာလုံး ဒီဟာပဲသောက်တယ်
မှုန်ကုပ်ကုပ်လုပ်ပြီး စိတ်ရှုပ်ရှုပ်မျက်နှာပေးနဲ့ဆိုတာ..သူဗိုက်ကလဲ၁၁ကြိမ်မြောက်ဂွီသံထွက်လာတယ် စဉ်းစားရင်းစဉ်းစားရင်း နေတ၀က်ဝင်သွားတယ် ထိုသူကတော့ပုလင်းကိုပါးစပ်မှာတပ်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်
မကောင်းပါဘူးဗျာ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်လည်ပင်းလဲပုလင်းတွေသီသွားတယ်ခြေလှမ်းတွေကလဲနှေးကွေးလို့ တွင်းထဲမှာပဲအချိန်ကုန်နေတယ် ရင်ဘတ်တွေကလဲမောလိုက်တာဗျာ ပြောမနေပါနဲ့တော့
အော် နောင်တရနေတယ်ထင်လို့လား ဟဲဟဲ မထင်နဲ့ဗျ တွင်းနဲ့အနီးဆုံးက ကျနော်အိမ်လေ ဟင်းဟင်း
အခုစကားပြောနေတာ ဘယ်ကပြောနေတယ်ထင်လဲဗျ တွင်းပေါ်တက်ရင်းနဲ့ပြောနေတာဗျ တွင်းပေါ်တက်ရင်းနဲ့ပြောနေတာ ကဲ အခုတွင်းပေါ်ရောက်ပြီ ...။
Posted by သဇင် ဖြူ at 12:34 pm
Flashsong လုပ်နည်း (7)
သီချင်းစာမျက်နှာ ၇ (1)
သီချင်းစာမျက်နှာ ၈ (1)
flashsong လုပ်နည်းအပိုင်း ၁
flash song ဖန်တီးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် မြန်မာေ...
flash song ၀သနာရှင်များအတွက် win ဖောင့်များ
♥♥♥ ချစ် သူ သိ စေ သော် ♥♥♥
ချိုသာသော အလွမ်းတစ်ခု၏ နိဂုံး”(၀တ္ထုတို)
flashsong လုပ်နည်းအပိုင်း(၂)စာသားထည့်နည်းနဲ့save လ...
flashsong ပုံလေးတွေပါ လိုင်ချင်အောက်မှာဒေါင်းလိုက်...
ကိုယ်တိုင်လုပ်လိုသူများအတွက် ဆော့ဝဲလ်များ အောက်မှာ...
သဇင်ဖြူ. Powered by Blogger.